Gaadiidka qudaarta soo geliyo Muqdisho oo lagu xayiray kontoroolka Siinka Dheer – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Gaadiidka qudaarta soo geliyo Muqdisho oo lagu xayiray kontoroolka Siinka Dheer
Wararka naga soo gaaraya duuleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan kontroolka Siinka Dheer ayaa sheegaya in maanta halkaasi lagu joojiyay dhowr gaadiid oo nooca kuwa qudaarta ka keena gobolka Sh/hoose.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan koontoroolka Siinka Dheer ayaa darawalada gaadiidkaas iyo sidoo kale ganacsatadda qudaarta u rarnayd ku amray inay halkaasi ku dejiyaan qudaarta ay u wadaan magaalada Muqdisho, kadibne dib loo rarro.
Tallaabadaasi ayaa keentay in muddo saacado badan ay qaadato, waxaana markii dambe loo ogolaaday gaadiidkaasi inay qudaarta si nadiif ah ku geliyaan magaalada Muqdisho.
Maalintii shalay ayay ahayd markii gaari noociisu yahay CAASI islamarkaana qudaar siday lagu weeraray xarunta degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, iyadoona weerarkaasi uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac.
Laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan u muuqda inay lasoo baxeen qorshe cusub oo looga hortagaayo weerarada iyo qaraxyadda ay Al-shabaab ka geystaan magaalada Muqdisho.
Al-shabaab ayaa marba marka kasii dambeysa la yimaada qorshe cusub oo ay qaraxyo iyo weeraro kaga geystaan magaalada Muqdisho, iyadoona qorshahaan ee ah in gaadiidka qudaarta weeraro lagu fulliyo uu haatan u muuqdo mid lala fahmay, balse laga yaabo inay sameeyaan kuwo cusub oo aanay hore u adeegsan.